Abantu baseMzansi sebehlupheka kakhulu kunango-2015 | News24
Abantu baseMzansi sebehlupheka kakhulu kunango-2015
Johannesburg – Iningi labantu baseNingizimu Afrika asebekhulile selihlupheka kakhulu manje okunangonyaka ka-2015, ngokocwaningo olwenziwe yibhange uStandard Bank.
UStandard Bank ukhiphe umbiko wawo wangonyaka ka-2016 ohlawumbisela imali engenayo kubantu ngoLwesithathu. Lolu cwaningo lukala ushintsho kwimali enganayo kubantu abasemazingeni ahlukene okuhola kusukela ngonyaka ka-2011. Iningi lemali engenayo (70%) itholakala ngamaholo. Lolu cwaningo luncike kubantu asebekhulile abaneminyaka esukela ku-15 kuya phezulu.
Lo mbiko ukhombisa ukuthi imali engenayo kumuntu ngamunye yehle ngo-1.3% ngonyaka ka-2016. Lokhu kwehla kusuka emalini engu-R76 578 kuya ku-R75 541.
Kusukela ngonyaka ka-2011, imali engenayo kumuntu ngamunye isakhule ngo-0.4%.
Lokhu kwehla kwemali engenayo kubantu kudalwa nayisimo somnotho esingesihle kanti kubonakala kakhulu kuwo wonke amazinga okuhola kwabantu abahola imali engaphezu kuka-R12 700 ngonyaka, ngokusho kombiko.
Abantu abahola imali encane ephakathi kusuka ku-R0 kanye no-R12 700 banyukelwe imali enganayo ngo-2.2%. Kodwa-ke labo abahola kakhulu (abahola imali engu-R1.69m ngonyaka) sebeyahlupheka kunakuqala, njengoba imali engenayo kumuntu ngamunye isiyehle ngo-8.8% phakathi konyaka ka-2015 no-2016. Imali engenayo isiyehle ngo-30.6% kusukela ngonyaka ka-2011.
Ngaphezu kokwehla kwemali engenayo, okunye okuphinde kushaye kuzwele kubathengi ukunyuka kwamanani ezinto ezitolo okulokhu kuqhubeke njalo.